Kuqhamuka Udlakela Olwesabekayo KuMDC KaTsvangirai KoBulawayo
Mabasa 22, 2011
Kuvuke udlakela kwalimala abantu abathile kwabhidlizwa lempahla ngoLwesihlanu edolobheni lakoBulawayo ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwabasekeli beMDC ekhokhelwa nguMnu Morgan Tsvangirai.
Amalunga alelibandla asekela icele likaMnu Matson Hlalo lasekela uMnu Gorden Moyo abhuqane ngamatshe layo yonke into ebingasebenza njengesikhali.
Lokhu ngokwesithathu ukuthi ukhetho lwenkokheli zeBulawayo Province lumisiwe ngenxa yodlakela.
Uhlalo uthi kavumi ukuthi uMoyo, yena osanda khethwa ukuba ngumgcinisihlalo webandla
KoBulawayo, unqobe okusemthethweni, ngakho uthi ufuna lolokhetho luphindwe andubana kukhethwe ezinye iziphathamandla kusukela kumsekeli kamgcinisihlalo kusiya phansi.
Ontanga bamacele womabili baqale ukubhuqana ngemva kokuvalelwa kwezigaba zeMpopoma lePelandaba, zona uMnu Hlalo athi zisekela yena, ukuphatheka okhethweni.
Kuvuke impi kutshaywana ngamatshe, izitina layo yonke into engaba yisikhali, okubangele ukuthi lolokhetho lumiswe njalo. Ontanga laba balimazane kabuhlungu batshaya lezimota ebeziseduze kwaze kwafika amapholisa wona acine ebopha abangabangamatshumi amabili.
Ekhuluma leStudio 7, uHlalo uthe akulakhetho olungenziwa ngaphansi kukaMoyo. Uthi impi yangoLwesihlanu isuswe yikuvalelwa kwabasekeli bakhe njalo uqinisa ukuthi lolokhetho alungeke lwenzeka ngaphandle kokuthi kuqale kwenziwe kutsha olukamgcinisihlalo.
Udlakela lolu lwenzeka nje uMnu Tsvangirai esanda kuxwayisa ukuthi amacele la amanyane ukuze umhlangano omkhulu webandla uqhubeke kuhle. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnu Effie Dlela Ncube uthe kuyenyanyeka okwenzakala kubandla likaTsvangirai.
Udaba Lusethulwa NguThabang Mathebula